Published: January 27, 2016 12:46 PM
काठमाडौं, माघ १३ । नयाँ बर्ष २०१६ को प्रारम्भसंगै ब्रिटिश गोर्खा नेपाली परिषदले बेलायतका विभिन्न स्थानहरुमा ‘गोर्खा कल्चरल नाइट’को आयोजना गरिरहेको छ । परिषदले विभिन्न सात स्थानमा बृहत सांगीतिक कार्यक्रम सामाप्त गरेको छ । थप सात स्थानमा कार्यक्रम तय भएको छ । कल्चरल नाइटमा भाग लिनका लागि नेपालबाट गएका...
‘मुन्द्रे’ नेपाल वायु सेवा निगमको ब्राण्ड एम्बेस्डर
Published: January 26, 2016 07:44 AM
काठमाडौं, माघ १२ । हाँस्य कलाकार जितु नेपाल (मुन्द्रे) नेपाल वायु सेवा निगमको ब्राण्ड एम्बेस्डरमा नियुक्त भएका छन् । निगमले सोमबार आफ्नो तीन वर्षे सुधार कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै मुन्द्रेलाई ब्राण्ड एम्बेस्डरमा नियुक्त गरेको हो । एक कार्यक्रमकाबीच पर्यटनमन्त्री आनन्द पोख्रेलले मुन्द्रेलाई निगमको नियुक्ति पत्र हस्तान्तरण...
‘ज्यानमाया’ म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक
Published: January 23, 2016 17:37 PM
काठमाडौं, माघ ९ । ‘सुर्के थैली’को लोकप्रियतापछि संगीतकार राजनराज शिवाकोटीको संगीत तथा गायिका अन्जु पन्तले गाएको गीत ‘ज्यानमाया तिमीलाई’को म्यूजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।शनिबार राजानीमा एक समारोहबीच सार्वजनिक गरिएको भिडियोको उक्त गीतमा राजुबाबु...
१७औं इमेज अवार्ड फागुन १ गते
Published: January 21, 2016 15:13 PM
काठमाडौं, माघ ७ । नेपाली सांगीतिक क्षेत्रको महाउत्सव १७औं इमेज अवार्ड आगामी फागुन १ गते हुने भएको छ ।नेपाली गीत–संगीतको उत्थान गर्ने उद्देश्यले हरेक वर्ष आयोजना गरिँदै आएको इमेज अर्वाडको यो संस्करणका लागि २३ विधाको मनोनयन सार्वजनिक गर्नुका साथै उत्कृष्ट पाँचमा पर्न सफल स्रष्टाहरुलाई प्रमाणपत्र वितरण पनि गरिएको छ ।इमेज...
‘पूर्वाञ्चल स्टार’ प्रकृतीको सांगीतिक दौड
Published: January 21, 2016 08:50 AM
काठमाडौं, माघ ६ । पूर्वाञ्चल सिङ्गिङ स्टार बनेछि नेपाली सांगीतिक क्षेत्रमा चम्किन थालेकी गायिका प्रकृति थलङ लिम्बु यतिबेला ‘नेपाली स्टार’ बन्ने दौडमा छिन । उनलाई साथ दिएका छन् सांगीतिक पृष्ठभूमीकै बुबा केन्द्र विक्रम, दाजुहरु कुशल र कन्चनले । त्यतिमात्र होइन उनको नयाँ एल्बम ‘प्रकृति’का लागि...
सिटिसी मलमा सैलून उद्घाटन गर्न ‘स्टार’ कलाकारको लर्को
Published: January 19, 2016 08:53 AM
काठमाडौं, माघ ५ । शनिवारदेखि काठमाडौंमा सौन्दर्य पारखीहरुका लागि अर्को एउटा बिसौनी थपिएको छ । सुन्धारास्थित सिटिसी मलको छैठौं तल्लमा सञ्चालनमा आएको ट्रेण्ड सेटर्स युनिसेक्स हेयर एण्ड ब्युटि स्टुडियोलाई शनिवार एक दर्जन बढि नेपाली सेलिब्रेटीले उद्घाटन गरेका छन् । सैलुनको उद्घाटन समारोहलाई पृथक बनाइएको थियो ।...
नायिका शुभेच्छा थापा ६ महिनाका लागि निलम्बित
Published: January 18, 2016 15:57 PM
काठमाडौं, माघ ४ । बौद्ध धर्माबलम्बीको पवित्र मानिने खादाले आफ्नो संवेदनशील अंग ढाकेर तस्वीर खिचाएकी अभिनेत्री शुभेच्छा थापालाई नेपाल चलचित्र कलाकार संघले कारबाही गरेको छ ।संघको कार्यसमितिको बैठकले उनलाई ६ महिनासम्म चलचित्रसम्बन्धी कुनैपनि गतिविधिमा संलग्न हुन नपाउने गरी निलम्बन गरेको संघका अध्यक्ष रामकेशर बोगटीले जानकारी दिए ।...
सञ्चारकर्मी खेमले गाए प्रेम–गीत
Published: January 16, 2016 12:21 PM
काठमाडौं, माघ २ । गीतमा माया प्रेमको सन्दर्भ आइरहन्छ । कतै प्रेम वियोग त, कतै प्रेम रोमान्सको कुराले गीतमा प्रवेश पाउँने गर्छ । ‘प्रेम’को ग्ल्यामरले तानेरै हुनसक्छ, गीत र प्रेम एकअर्काको पयार्य जस्तै बनेको । यसै सिलसिलामा अर्को गीत थपिएको छ, ‘कोहि भन्छन् माया ।’ गायक खेम रिसालले स्वरबद्ध...
रोए धुर्मुस र सुन्तलीे मुसहर बस्तीमा
Published: January 15, 2016 11:40 AM
राजकरण महतो - महोत्तरी,माघ १। हाँस्य कलाकार धुर्मुस र सुन्तली महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाको वडा नम्बर २ स्थित मुसहर बस्तीमा पुगेर रोएका छन् । उनीहरु बस्तीको दयनीय अवस्था देखेर आँसु पुछ्दै बस्तीबाट निस्किएका थिए । बर्दिवास नगरपालिकाका कर्मचारी लगायत अन्य टोलीहरु मुसहर बस्तीको अवस्था बुझ्न पुगेका...
माघ २ गते नाकाबन्दीको रहस्य खुल्ने
Published: January 12, 2016 08:33 AM
काठमाडौं, पुस २८ । आउँदो माघ २ गते ललितपुरको स्टाफ कलेजस्थित हलमा नाकाबन्दीको रहस्य खुल्ने भएको छ । ललितपुरको ताम्राकार तथा राजोपाध्याय समाजले संयुक्त रुपमा आयोजना गरिने चलचित्र प्रदर्शनीको विशेष कार्यक्रममा नाकाबन्दीको रहस्य खुल्ने भएको हो । नेपाली ऐतिहासिक चलचित्र ‘कीर्तिपुर’ द लिजेन्ड अफ कीर्तिलक्ष्मीको...
७३ औं गोल्डेन ग्लोब अवार्ड : लियोनार्दो बने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता
Published: January 11, 2016 12:32 PM
लस एन्जलस, पुस २७ । अमेरिकाको लस एन्जल्समा आयोजित ७३ औं गोल्डेन ग्लोब अवार्डमा लियोनार्दो डि क्याप्रियोलाई ड्रामातर्फ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित गरिएको छ । उनले चलचित्र ‘दि रेभेनान्ट’ बाट सर्वश्रेष्ठ अभिनेताको उपाधि हासिल गरेका हुन् । उत्कृष्ट चलचित्रको विधामा पनि ‘दि रेभेनान्ट’ कै बर्चश्व...
‘हामी उठ्ने छौं’ले बनायो विद्यालय, रेखा र जितुले गरे हस्तान्तरण
Published: January 10, 2016 08:54 AM
सिन्धुपाल्चोक, पुस २६ । भूकम्पले भत्काएको सिन्धुपाल्चोक कर्थली–७ पोखरेस्थित श्री ईश्वरीमाला प्रावि ‘हामी उठ्ने छौं फाउण्डेसन’ ले निर्माण सम्पन्न गरी विद्यालय ब्यवस्थापन समितिलाई हस्तान्तरण गरेको छ । गत बैशाख १२ र २९ गते गएको भूकम्पले भत्किएको उक्त विद्यालय भवनलाई नयाँ संरचनामा निर्माण गरिएको हो...
Published: January 8, 2016 08:50 AM
लस एन्जलस, पुस २४ । ‘स्टार वार्स’ शृंखलाको हलिउड चलचित्र ‘स्टार वार्स– दि फोर्स अवेकन्स’ ले साइन्स फिक्सनमा आधारित अर्को हलिउड चलचित्र ‘अवतार’ लाई आम्दानीको हिसाबले उछिनेको छ । छिटो १०० करोड डलरको कारोबार गर्ने हिसाबमा यो चलचित्रले अन्य चलचित्रलाई उछिनेको हो । ...
‘बागमती’ रिलिज हुनुपूर्व नै नायकद्वयको ‘मुटु ढुकढुक’
Published: January 7, 2016 07:54 AM
काठमाडौं, पुस २३ । अभिनेता राजेश हमाल र शिव श्रेष्ठले बर्षौपछि सँगै काम गरेको फिल्म ‘बागमती’ शुक्रबारबाट रिलिजको तयारीमा छ । साउथ इण्डियन निर्देशकको यो फिल्मप्रति दर्शकदिर्घामा उत्सुकता र कौतुहलता भएपनि कलाकारहरुको समेत मन ’ढुकढुक’ छ रे ! मंगलबार राजधानीमा सँगै भेटिएका हमाल र शिवले यस्तो तर्क गरे । ...
१०५ दिनको जेल सजाय माफी पाए संजय दत्तले, आगामी महिनामा रिहा हुने
Published: January 7, 2016 07:49 AM
मुम्बई, पुस २३ । ‘आर्म्स एक्ट’ मा दोषी ठहर भई जेल सजाय भोगिरहेका बलिउड नायक संजय दत्त आगामी महिना रिहा हुने भएका छन् । अदालतबाट तोकिएको जेल सजाय पुरा नगर्दै उनी रिहा हुन लागेका हुन् । भारतीय संचारमाध्यमका अनुसार संजय दत्तलाई १०५ दिनको जेल सजाय माफ गर्दै रिहा गर्न लागिएको हो । अर्थात् उनी आफ्नो जेल सजाय...